Ny Apple Watch dia mametraka ny famantaranandro Soisa amin'ny tady | Avy amin'ny mac aho
Ny Apple Watch dia mametraka famantaranandro Soisa amin'ny tady
La Federasionan'ny indostrian'ny fiambenana Soisa (FSWI), nanambara fa sambany avy amin'ny 2009, ny Nihena ny fanondranana famantaranandro soisa nentim-paharazana, ary toa ny Apple Watch no tompon'antoka.
Fanondranana famantaranandro avy any Soisa, nilatsaka efa ho 9 isan-jato teo anelanelan'ny volana aprily sy mey, araka ny isan'ny Federasionan'ny indostrian'ny fiambenana Soisa. Ny vaovao dia tonga taorian'ny fanombohan'ny Apple Watch, ny April 24, izay natambatra tamin'ny fiovaovan'ny tsenan'ny vola, dia niteraka ny fihenan'ny orinasa voalohany, afaka enin-taona mahery.
Fanondranana fiambenana Soisa any Etazonia., miaraka amin'ny maridrefy ambany kokoa, mety ho nisy ihany koa fiatraikany ratsy amin'ny famoahana ny famantaranandro Apple. Ny tsenan'i Etazonia dia tsy afaka mitombo, amin'ny isan-jato tokana amin'ity taona ity, izay mampiadana ny fitomboana 6 isan-jato amin'ny 2014, Ilay mpandalina atao hoe Patrik Schwendimann dia nilaza tamin'i Bloomberg.
Ireo famantaranandro Soisa dia tsy vitan'ny hoe aondrana any Etazonia fa mihisatra izy ireo. Mampiseho ny tatitra a 34 isan-jato ny fihenan'ny tany Hong Kong, izay ividianan'ny mpanjifa sinoa matetika ny famantaranandro Soisa, hanararaotana ireo hetra ambany, izay aloa.
Apple mijery tsy isalasalana fa toa mihinana ampahany amin'ny tsenan'ny fiambenana Soisa, ary raha tsy diso ny mpandinika, mety hiharatsy izany. Ao amin'ny Apple Watch izao dia manana fampiasa hafa izy io, izay omeo ny ora marinaEto amin'ity tontolo ity dia tsy takiana intsony intsony fa adiny iray monja ary ho tsara tarehy izy io, eto amin'ny tontolo teknolojia tsy mitsaha-mitombo isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ny Apple Watch dia mametraka famantaranandro Soisa amin'ny tady
Nolavin'i Apple ny fitakian'ny artista manery anao hisoratra anarana amin'ny Apple Music